အချိန်တွေဘယ်လို ပြောင်းပစေ သူမ ဘဝအတွက် အမြဲအ မှတ်ရနေ မယ့် အမှတ်တရ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး တင်လာ ခဲ့ တဲ့ မင်းသမီးလေး မိုးဟေကို – Zartiman
အချိန်တွေဘယ်လို ပြောင်းပစေ သူမ ဘဝအတွက် အမြဲအ မှတ်ရနေ မယ့် အမှတ်တရ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး တင်လာ ခဲ့ တဲ့ မင်းသမီးလေး မိုးဟေကို
Zarti Man | April 26, 2020 | Celebrity | No Comments
သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို သာ တင်လေ့ရှိသူ မိုးဟေကို က ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၆)ရက်နေ့မှာတော့ သူမဘဝ အမှတ်တရ နေတော့မယ့် အမှတ်တရ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခု ကို “အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ပဲကြာသွား ပေမယ့် ကျွန်မချစ်သော.. ဖန်တီးမှုလေးက မိုး ဘဝမှာဘယ်တော့မှမေ့မရတဲ့ အမှတ်တရတွေထဲက အမှတ်တရ တစ်ခု….။
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုကို အကောင်းဆုံး စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ဖန်တီး ပေးခဲ့တဲ့ Life Photography မှ ကိုလင်းထွန်း ကိုကင်း ကိုဆုရာ နဲ့ ကိုသုံးပေါင် ပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်ချင်းဆီ ကိုလည်း အမြဲ အမှတ်တရ ကျေးဇူးတင်လျက်…. ။ ကျွန်မချစ်သော…. ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်…” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
မြန်မာပြည်အနှံ့ လှပလွန်းတဲ့ ရှုခင်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ “ကျွန်မချစ်သော” MTV လေးကို သူမဘဝအတွက် အမှတ်တရလေးအဖြစ် ကျန်နေခဲ့မယ့် အမှတ်တရဗီဒီယိုလေအနေနဲ့ သူမချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ပါ ချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး.။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း မိုးဟေကိုရဲ့ အမှတ်တရတွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
မ ဟာဆန်စွာ လှပတဲ့နာမည်ကြီး မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မိုးဟေကိုကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီး သားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ မိုးဟေကိုက မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အများချစ်ခင်မှု တွေကို ရရှိကာ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။
မိုးဟေကိုက လက်ရှိမှာ ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို သိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲ “မိုး” ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကို ဦးစီးလုပ်ဆောင် နေတာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..။
Source:Moe Hay Ko’s Facebook Crd:Sakura(Cele Connections)
အခြိနျတှဘေယျလို ပွောငျးပစေ သူမ ဘဝအတှကျ အမွဲအ မှတျရနေ မယျ့ အမှတျတရ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး တငျလာ ခဲ့ တဲ့ မငျးသမီးလေး မိုးဟကေို
သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေို သာ တငျလရှေိ့သူ မိုးဟကေို က ဒီနေ့ ဧပွီလ (၂၆)ရကျနမှေ့ာတော့ သူမဘဝ အမှတျတရ နတေော့မယျ့ အမှတျတရ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးတဈခု ကို “အခြိနျတှေ ဘယျလောကျပဲကွာသှား ပမေယျ့ ကြှနျမခဈြသော.. ဖနျတီးမှုလေးက မိုး ဘဝမှာဘယျတော့မှမမေ့ရတဲ့ အမှတျတရတှထေဲက အမှတျတရ တဈခု….။
ဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒတဈခုကို အကောငျးဆုံး စိတျရှညျသညျးခံပွီး ဖနျတီး ပေးခဲ့တဲ့ Life Photography မှ ကိုလငျးထှနျး ကိုကငျး ကိုဆုရာ နဲ့ ကိုသုံးပေါငျ ပါဝငျပေးခဲ့တဲ့ တဈယောကျခငျြးဆီ ကိုလညျး အမွဲ အမှတျတရ ကြေးဇူးတငျလကျြ…. ။ ကြှနျမခဈြသော…. ပရိတျသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျ မြှဝပေေး လိုကျပါတယျ…” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
မွနျမာပွညျအနှံ့ လှပလှနျးတဲ့ ရှုခငျတှနေဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ “ကြှနျမခဈြသော” MTV လေးကို သူမဘဝအတှကျ အမှတျတရလေးအဖွဈ ကနျြနခေဲ့မယျ့ အမှတျတရဗီဒီယိုလအေနနေဲ့ သူမခဈြတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျပါ ခပြွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး.။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး မိုးဟကေိုရဲ့ အမှတျတရတှေ ပါဝငျနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော..။
မ ဟာဆနျစှာ လှပတဲ့နာမညျကွီး မငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ မိုးဟကေိုကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျရငျးနှီးပွီး သားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ မိုးဟကေိုက မျောဒယျတဈယောကျအနနေဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို စတငျလုပျကိုငျခဲ့ပွီး အမြားခဈြခငျမှု တှကေို ရရှိကာ အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ.။
မိုးဟကေိုက လကျရှိမှာ ကိုယျတိုငျ သရုပျဆောငျမှုတှကေို သိပျမလုပျဖွဈတော့ဘဲ “မိုး” ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးကို ဦးစီးလုပျဆောငျ နတောဖွဈကွောငျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ..။
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ သူမဘေးနားက ကောင်ချောလေး အကြောင်း ပြောပြလိုက်တဲ့ ပိုပို
လက်မထပ်ဘဲအတူနေဖြစ်ခဲ့လို့ ကလေးရလာတာကိုတာဝန်မယူ၍ ဘ၀ကိုရုန်းကန်နေရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အေသင်ချိူဆွေ
ဇာတ်ကား အတူ ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်ဘိုမ ကို ပိုက်ဆံနဲ့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ သွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး(ရုပ်သံ)